မြဝတီ - ထို့ကြောင့် . . . .ကျွန်တော်အိမ်မှာနေပါသည်
ထို့ကြောင့် . . . .ကျွန်တော်အိမ်မှာနေပါသည်
Saturday, 23 May 2020 10:05 Written by ေညာင္ရမ္း font size decrease font size increase font size
ကျွန်တော်အိမ်မှာ နေပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်၊ မိမိ မိသားစုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ကို COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ မကူးစက်ရန် ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုရောဂါသည် တရုတ်ပြည်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်မူ ထိုစဉ်ကသတိထားစောင့်ကြည့်ရုံမှလွဲ၍ ထူးထူးခြားခြားခံစားမှု မရှိခဲ့သေးပေ။ယင်းကာလများတွင် ကျွန်တော်သည်ကျန်းမာရေးအတွက် ညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်မြဲပင်။ ထိုသို့လမ်းလျှောက်နေစဉ် ကျွန်တော်ချောင်း တဟွတ်ဟွတ်ဆိုးသည်။ ကျွန်တော့်ချောင်းဆိုးသံကို မည်သူမှအရေးအရာမလုပ်။ အထူးတလည် လှမ်းကြည့်မည့်သူမရှိ။သို့သော် မတ် ၂၃ ရက်မှစ၍ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုစတင်တွေ့ရှိလာသောအခါ ပြည်သူတွေနိုးထလာကြသည်။
ကိုယ့်အိမ်အနီးသို့ရောက်မလာသေးသဖြင့် မကြောက်သူကလည်း မကြောက်၊ ကြောက်သူကလည်း ကြောက်တတ်လာကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်တော့်ချောင်းဆိုးသံ၊ ချောင်းဟန့်သံသည်လည်း အသက်ဝင်လာတော့သည်။ ကျွန်တော့်ချောင်းဟန့်သံ တစ်ချက်ကြားလိုက်သည်နှင့် ရှေ့ရောက်သူက နောက်လှည့်ကြည့်သည်။ ဘေးရောက်လာသူက မျက်စောင်းဖြင့်လှည့်ကြည့်သည်။ ခပ်ဝေးဝေး ရောက်နှင့်ကြသူအပေါင်းက ဝိုင်းဝန်းကွက်ကြည့်ကြလေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မျက်လုံးပေါင်းများစွာ ကျွန်တော့်ထံစုပြုံရောက်လာသည့်အခါလှမ်းလက်စခြေလှမ်းများတုံ့ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ ယင်းနောက်တွင်ကား ကျွန်တော်၏ ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်း နှင့်အတူ ဈေးသွားခြင်းအလုပ်ကိုပါ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ စင်စစ်တွင်မူ ကျွန်တော်သည် ရာသီကူးပြောင်းတိုင်း ချောင်းဆိုးတတ်သည်။ ချောင်းဆိုးတိုင်း လချီ၍ကြာတတ်သည်မှာ အစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ယခုလိုကာလတွင်မူ ချောင်းဆိုးခြင်းသည် COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နေ၍ ခွင့်ပြုရန်မသင့်တော့။ ဆရာဝန်ပေးသော သောက်ဆေးများနှင့် မိမိသောက်နေကျ ဗမာဆေးများကို အဆက်မပြတ် သောက်သော်လည်း ချောင်းသံကအသံပေးနေဆဲ။ သည်တော့ ကျွန်တော်၏ အိမ်ရှင်မကပင် အပြစ်တင် လာသည်။ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ဆိုသော်လည်း မည်သူကမျှ လက်ခံပေးကြမည် မဟုတ်ကြောင်း နားလည်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏တိုက်ခန်း ပတ်ပတ်လည်တွင် ရှဉ့်လေးများ အများအပြားရှိသဖြင့် နေ့စဉ်အစာထမင်းကျွေးခဲ့သည်။ သောက်ရေခွက်တစ်ခွက်ပါ အသင့်ချထားပေးခဲ့သည်။ ရှဉ့်လေးများအစာစားပြီးနောက် အမြီးတဖွားဖွားဖြင့် မြူးထူးပြေးလွှား နေတာကို ကြည့်၍ ပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ယခုတော့မူ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော ရှဉ့်လေးများနှင့်လည်း မလွဲမရှောင်သာ အဆက်ဖြတ်ရ တော့သည်။ ကျွေးနေကျထမင်းခဲများကို ရေဆေးသုတ်သင်ခဲ့ပြီး သောက်လက်စ သောက်ရေခွက် ကိုလည်း အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ခဲ့ရတော့သည်။ အစာဖြတ်ခဲ့သည့် ညတစ်ညလုံးလိုလိုပင် ရှဉ့်လေးများသည် ကျွန်တော့်ခေါင်းရင်းရှိ မှန်တံခါးကို အမြီးဖြင့် တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ကာ အစာတောင်းနေရှာသည်။ စိတ်ထဲမှ တစစ်စစ်နာကျင်မိသော်လည်း ''ခွင့်လွှတ်ပါ ရှဉ့်လေးတို့ရယ်'' ဟုသာ တိုးလျှိုးတောင်းပန်နေမိသည်။ ထိုသို့အရာရာတိုင်းကို ထိတ်လန့်ကာ၊ သံသယဖြစ်တာတွေနှင့် ခံစားလာရသည့်အခါ ကျွန်တော်တို့ အထက်တန်း ကျောင်းသားဘဝက ကျက်မှတ်ခဲ့ရသော ကဗျာတစ်ပုဒ်စီ ဖြတ်ခနဲအတွေးရောက်သွားမိသည်။ ကဗျာစာဆိုရှင်မှာ ကေသီလှိုင်ဖြစ်သည်။
ကဗျာစာဆိုရှင်က ယနေ့ခေတ်ကာလကိုပင် မြော်တွေးမှန်းဆကာ စပ်ဆိုခဲ့လေသလားဟုပင် စိတ်ထဲမှ စွဲထင်လာခဲ့ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင်ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးသံသယဖြင့် ဆက်ဆံလာကြသည်။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်၊ ကိုယ့်လမ်း၊ ကိုယ့်တိုက်ခန်းများ၌ နေထိုင်ကြသူ အချင်းချင်းပင် သတိထားစောင့်ကြည့်လာကြသည်။ ယခင်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ချိန်းချက်စကားပြောဆို နေကြသည့် အပေါင်းအသင်းများနှင့်လည်း ဖုန်းဆက်ပြီးသာစကားပြောကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ မတ် ၂၃ ရက်မှစ၍ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိလာခဲ့သည်။တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ ကြုံတွေ့လာသော ရောဂါဆိုးကြီးအား ကာကွယ်ရန်မဟာဗျူဟာနှင့် နည်းဗျူဟာကို ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။ ရှေးဦးစွာ ဆောင်ရွက်ချက်အနေဖြင့် ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် စိန်ရတုတပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း မေ ၁ ရက်က အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးခုျပ်အနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးများကို မတ် ၃၀ ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊ ဧပြီ ၈ ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊ ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ ဧပြီ ၂၀ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊ ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊မေ ၇ ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊ မေ ၂၁ ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း ခုနစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ ယင်းအစည်းအဝေးတွင် အဓိက အရေးပါသည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ကာဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများအတွက် တပ်မတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်အချို့ကို ကောက်နုတ်တင်ပြလိုပါသည်။ တပ်မတော်သည် ပထမဆုံးအကြိမ် မတ် ၃၀ ရက်အစည်းအဝေးပြီး ကတည်းက တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များအား အရေးကြီးသည့်ကိစ္စမှအပ အပြင်မထွက်ရန်က န့်သတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုဆောင်ရွက် ချက်မှာ မိမိမှစ၍ ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူအတွက် အကာအကွယ်ပေး ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော်သည် ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့်ဆေးဝါး ၅၈ မျိုးကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြည်သူလူထုအတွက် Quarantine လုပ်နိုင်ရန်၊ ရန်ကုန်စစ်ကြောရေးနှင့်တည်းခိုရေးစခန်းတွင် ခုတင် ၂၀၀၀၊ နေပြည်တော်စစ်ကြောရေးနှင့်တည်းခိုရေးစခန်းတွင် ခုတင် ၁၅၀၀၀ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် တပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံမှ Mask နှင့် PPE ဝတ်စုံများ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ အပါအဝင် အရပ်ဘက်ဆေးရုံများသို့ လှူဒါန်းပေး ခဲ့သည်။ မီဒီယာအနေဖြင့် လက်ဆေးနည်း၊ Mask တပ်နည်းတို့ကို အသိပညာပေးခဲ့သည်။ ထိုမျှသာမက တပ်မတော်သည် ပြည်သူများအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖောင်ကြီး ယာယီဆေးရုံသို့ မိမိတို့၏ဆေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပါရဂူဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ကို စေလွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် တပ်မတော်လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်များအား အသုံးပြုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါ တပ်မတော်တွင် ရှိထားသော COBAS 6800 စက်များမှာ လိုအပ်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးနိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့လက်ရှိ အခြေအနေအရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် COVID-19 ရောဂါကိုတွန်းလှန်ရန် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မီ တိုးတက်သည့် နိုင်ငံကြီးများပင်လျှင် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က ဖန်တစ်ရာတေကြားနေရသော ''တစ်ယောက်မကောင်းအများ''ဆိုသည့် စကားကိုဘဝင်မတွေ့ခဲ့ပါပေ။ ယင်းအဆိုအမိန့်အတွက်လည်း ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးဖြင့် ချေပခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် တပ်မတော်အတွင်း အနည်ထိုင်လာသည်နှင့်အမျှ ထိုစကား၏ အသုံးတည့်မှုကို သိလာရပါသည်။ ယနေ့ ''တစ်ယောက်မကောင်းအများ'' ဟူသော အဓိပ္ပာယ် ပြန်လည်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် စကားလုံးမှာ အနည်းငယ်မာကျော၍ ''မကောင်း''ဆိုသည့် စကားလုံးကိုဖြုတ်သိမ်းပါမည်။ ''တစ်ယောက်မကောင်း''ဆိုသည်ထက် စည်းကမ်းမလိုက်နာသော တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ မိမိကိုယ်ကို မိမိမကာကွယ်သော တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့် မိမိ မိသားစု၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိနိုင်ငံရှိလူအများ ရောဂါပိုးကူးစက်ကြမည်ကိုတော့ လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အရင်ကာကွယ်ဖို့လိုပါမည်။ ''ထို့ကြောင့် ...ကျွန်တော်အိမ်မှာ နေပါသည်''။ ။
Last modified on Saturday, 23 May 2020 10:06
More in this category: « ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းရေး အလေးထားဆောင်ရွက်စို့ သတိပြုကာကွယ် မိုးကြိုးအန္တရာယ် »